အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့သူတွေရဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတွေပါ
သင့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် ပရိုမိုးရှင်း အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ!
"အခုအချိန်မှာတော့ အဖွားက ကမ္ဘာ့အပျော်ဆုံးလူသားတစ်ယောက် ဖြစ်နေပါပြီ"လို့ - ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံက Blanca Camargoက ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်.
သူမကတော့ ဇွန်လအတွက် အိပ်မက်တကယ်ဖြစ်လာပြီပရိုမိုးရှင်းမှာ ဆုရရှိခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်. အ၀တ်လျှော်တာသက်သာဖို့ အဝတ်လျှော်စက်တစ်လုံး လိုချင်ပါတယ်လို့ ဆန္ဒပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. Blancaတစ်ယောက် အစပိုင်းတော့ စဉ်းစားနေခဲ့ပါသေးတယ်. ဒါပေမယ့် တကယ်ပါဝင်ဆင်နွှဲဖို့ မှန်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်. သူအနိုင်ရရှခဲ့ပါပြီ!
သင့်ရဲ့အတောင့်တဆုံးလိုအင်ဆန္ဒတွေ တကယ့်ဖြစ်လာစေမယ့် စစ်မှန်တဲ့အခွင့်အရေးက ဒီမှာပါ: